🥇 ▷ Android Q hadda waa Android 10: Talefoonno noocee ah ayaa heli doona ✅
Android Q hadda waa Android 10: Talefoonno noocee ah ayaa heli doona
Laga bilaabo maanta waxaan joojin doonnaa tixraaca nooca cusub ee Android sida Android Q loogu talagalay ugu yeer Android 10. Shirkadda matoorka baarista ayaa sameysay magaca mashiinka cusub ee nidaamka qalliinka, kaasoo aan mar dambe yeelan doonin magac macmacaan oo lagu bilaabi karo lambarro u fududayn doona in la garto nooc kasta. Laakiin waxa ugu muhiimsan hadda waa in la ogaado telifoonnada marka ugu horreysa lagu cusboonaysiin doono Android 10.
Google wuu dhihi karaa wuu ka dheereeyaa laakiin ma cadda. Ku dhejinta magacyada macmacaanka qeyladooda waxay ahayd wax aad u xiiso badan laakiin isticmaaleyaal badan ayaa ku lug yeeshay markii ay ogaadeen nooca Android ee ay leeyihiin iyo haddii aysan ahayn kuwa ugu dambeeyay. Marka laga bilaabo hadda waxaan haysan doonnaa lambarro si aan u garanno noocyada, laga bilaabo Android 10 oo aan annagana tixgelinno taas Sannadka soo socda waxaan yeelan doonnaa Android 11.
Talefoonadee ayaa la cusbooneysiin doonaa marka hore
Hadda isticmaaleyaal badan oo leh Android 9 Pie ayaa la yaaban goorta ay heli karaan noocyada ugu horreeya ee Android 10 oo ay isku dayaan dhammaan wararka ku saabsan taleefannadooda. Hagaag, soo saareyaasha qaar ayaa horey u xaqiijiyay imaatinka Android 10 isla marka Google ay sii deyso nooca xasilloon ee nidaamka hawlgalka. Maskaxda ku hay in tan koowaad Google Pixels waxay lahaan doontaa mudnaan, laga bilaabo Pixel 4 iyo Pixel 4XL, qkaas oo noqon doona taleefannadii ugu horreeyay ee suuqa illaa taariikhda nooca cusub. Google ayaa markii dambe cusboonaysiin doonta Pixel 3 iyo 3XL iyo moodallo hore.
Telefoonada Google ee heli doona Android 10
Google Pixel 3aad XL
Iyo magacyo kale?
Soosaarayaasha ugu waa weyni waxaa ka go’an horumarinta Android Q bilo. Tani waa kiiska sumadaha sida Huawei, Honor, Samsung, Motorola, Nokia ama Xiaomi lafteeda. Khariidadda marinnada marinnada soo-saareyaashan ayaa waxaa ka mid ah cusboonaysiinta dhowr ka mid ah moodooyinkooda.
Mudane 20, Mudane 20 Pro, Mudane View 20 iyo Mudane Magic 2 ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee cusboonaysiinta hela. Honor India waxay sidoo kale ku xaqiijisay barta Twitter-ka ee Honor 10 iyo Honor 8X waxaa la rajaynayaa inay dhawaan helaan casriyeynta Android 10
Mudane 9X Pro
Mudane 20i / 20 Lite
Muuqaal Maamuus 10 / Maamuus V10
Mudane 10 GT
Mudane 10 Lite
Xusuus Sharaf 10
Mudane 20 – dhamaadka Sebtember
Mudane 20 Pro – dhamaadka Sebtember
Sharafta V20 (Muuqaalka 20) – dhamaadka Sebtember
Maamuus Magic 2 – dhamaadka Sebtember
Huawei waxay casriyeyn doontaa marinkeeda ugu weyn ee Android 10, sida maalmo ka hor ay xaqiijisay in Huawei P30 Pro ay dhowaan heli doonto beta ugu horreeya ee EMUI 10 iyada oo ku saleysan noocaan cusub. Xadka loo yaqaan ‘Mate 20’ ayaa sidoo kale ka mid ah musharixiinta, sidoo kale wuxuu ahaa sanadkii ugu dambeeyay ee loo yaqaan ‘P20 range’ iyo sidoo kale Mate 10 Pro ayaa xitaa lagu sheegay musharixiinta inay heli doonaan Android 10 dhawaan.
Huawei Mate 20 – dhammaadka Sebtember
Huawei Mate 20 Pro – dhammaadka Sebtember
Huawei Mate 20 X – dhammaadka Sebtember
Huawei Mate 20 X (5G) – dhamaadka Sebtember
Huawei P30 – Sebtember 8
Huawei P30 Pro – Sebtember 8
Samsung waa mid ka mid ah magacyada ka go’an in ay casriyeeyaan moodalkooda ugu waaweeyn dhowaan. Shirkadda Kuuriya ayaa ka aamusan Android 10, laakiin qofna shaki kama qabo in liistada ay aad u dhameystiran tahay. Sidoo kale waa run in ay jiraan Terminallo sida Samsung Galaxy S8 ama Note 8 oo laga tagi karo cusboonaysiinta, maadaama ay heleen labo cusbooneysiin ah oo ku saabsan nidaamka qalliinka, daboolka oo badanaa ku jira siyaasada shirkada Kuuriya. .
Shirkadda Japanese-ka ah ayaa iyaduna iman doonta ballankeeda iyada oo ay la socoto Android 10. In kasta oo shirkaddu aysan shaacin qorshayaasheeda, qofna la yaab ma ahan in dadka ugu horreeya ee nasiibku isku dayayaan in ay tijaabiyaan Android 10 ay yihiin milkiilayaasha Xperia 10 iyo Xperia 10 Plus, iyo sidoo kale the Xperia XZ3. Waxaa la filayaa in kuwan oo ay la socdaan moodooyin kale, ay yihiin kuwii ugu horreeyay ee Sony ee leh nidaamka hawlgalka cusub.
Shirkadda Shiinaha ayaa hadda leh laba moobiil gudahood barnaamijka beta 10 ee Android, sida Mi 9 iyo Mi Mix 3 5G. Redmi K20 Pro, oo loo yaqaan Yurub ee loo yaqaan ‘Mi 9T Pro’, ayaa sidoo kale ka qaybqaata barnaamijka. Saddexdaas Terminal waxay leeyihiin dhammaan codad-bixinta inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee lagu cusboonaysiiyo Android 10.
Xiaomi Mi A1 *
Motorola wuxuu sidoo kale ka shaqeeyaa sidii uu ugu cusbooneysiin lahaa qaar badan oo ka mid ah terminalkooda Android 10. Kuwa kale ee taa liddi ku ah waa laga saari doonaa barnaamijka, sida Moto E6. Waxaa sidoo kale la rajeynayaa in Motorola taleefannada mobilada leh ee leh Android One ay helaan casriyeynta si ka dhaqso badan moodooyinka kale, maaddaama aysan ku xirneyn la qabsiga lakab kasta.
Moto Z3 Ciyaar
Awooda Moto G7
Moto G7 Ciyaar
In kasta oo ay Nokia 8.1 ka diiwaangashan tahay barnaamijka beta 10 ee Android 10, haddana waxa suurtagal ah in shirkaddu cusbooneysiiso qayb wanaagsan oo ka mid ah faylalka ay ka kooban tahay. Nokia waxay qabataa shaqo wanaagsan oo ku saabsan casriyeynta, gaar ahaan maadaama ay ka go’an tahay mashruuca Android One. Shirkadda ma aysan qaadin maalin ay ku soo bandhigto qorshaheeda Android Q, muujinta taleefannada iyo taariikhaha.
Shirkadda labaad ee Kuuriyaanka ah ee heerka sare ah ayaa sidoo kale xoqin doonta raashinkeeda Android 10, kaasoo gaari doona ugu yaraan mobiladooda ugu awoodda badan. LG G8 ThinQ wuxuu ku dhex jiraa barnaamijka beta, inkasta oo sidoo kale la rajeynayo inuu gaaro jiilkii hore iyo moodooyin kale.
HTC kama uusan helin wax deg deg ah si ay u cusbooneysiiso taleefannadooda Android 9 Pie, isla sababkaas oo aan uga fileynin inay si dhaqso leh ula dhaqmaan Android 10. Waxaa la filayaa in aalado la mid ah oo lagu cusbooneysiiyay Pie sidoo kale ay sameyn doonaan nooca cusub Android 10
Cidina kama filayso Android 10 inay soo gaadho OnePlus 3 ama 3T, laakiin waxay ku dhacdaa aaladda oo dhan astaamaha astaanta laga soo qaatay OnePlus 5. Sidan ayeyna boosteejooyinka la doorto ay u noqon lahaayeen kuwa soo socda, oo aan ku darno mustaqbalka OnePlus 7T iyo OnePlus 7T Pro.
Annagu garan mayno jadwalka Asus, laakiin shaki kuma lihin in telifoonnadeeda ugu weyn ay heli doonaan raashin u gaar ah oo ay leeyihiin Android 10, oo ay ku jiraan ereygooda smarpthones taxanaha ah ee ‘ROG’. Kuwa ugu horreeya ee la filayo in la cusboonaysiinayo nooca cusub ayaa ah kuwan soo socda.
Soo-saaraha Shiinaha, ee hooska OPPO iyo Xiaomi, wuxuu sidoo kale ku biiraayaa xisbiga isagoo wata dhowr teknolojiyad casri ah oo ay ku jiraan kaydiyadooda ay tahay inay helaan nidaamka hawlgalka bilaha soo socda.